Samsung TV အလိုလျောက် ပိတ်နေ ပွင့်နေခြင်း | Samsung Support Myanmar
Samsung TV အလိုလျောက် ပိတ်နေ ပွင့်နေခြင်း
မိမိ၏ ဆမ်ဆောင်တီဗွီသည် သိသာသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ အလိုလျောက် ပိတ်နေ ပွင့်နေခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေပါက အချို့သော အချက်များအား စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။ မိမိ၏ တီဗွီတွင် စွမ်းအင်ခြွေတာသော လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိပါက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု များစွာမဖြစ်ပေါ်စေရန် တီဗွီ မီနူးရှိ စွမ်းအင်ခြွေတာခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအား ထိန်းညှိနိုင်သည်။
ယခင်ထွက်ရှိပြီးသော ဆမ်ဆောင်းတီဗွီ မော်ဒယ်အဟောင်းများအတွက် လုပ်ဆောင်ရန်မှာ -
Menu > System > ECO solution >
“No Signal Power Off” နှင့် “ Auto Power Off” အနေအထားများအား အားရွေးချယ်ရန် တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
ဆမ်ဆောင်းတီဗွီမော်ဒယ် အသစ်များအတွက်မူ အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Settings > General > ECO Solution >
ထိုမှတဆင့် “Energy Saving Mode” နှင့် “Auto Power Off Mode” တို့အား ထိန်းညှိနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ “Auto Power Off” ရွေးခြယ်မှုအား ပိတ်ထားပါက တီဗွီသည် မည်သည့်လုုပ်ဆောင်ချက်မှ မပြုလုပ်သောအခါတွင်လည်း ဖွင့်လျက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မိမိ တီဗွီ၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်လည်း သိသာထင်ရှားစွာ မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ QLED မော်ဒယ်များ -
၂၀၁၈ QLED တီဗွီများအား SmartThings App ဖြင့် အသုံးပြုပါက မိမိ၏ တီဗွီအား အလိုလျောက်ပိတ်စေနိုင်သော အချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ Settings of the SmartThings app တွင် ပါရှိသော “Allow Phone Presence Detection” လုပ်ဆောင်မှုသည် ချိတ်ဆက်ထားသော ဖုန်းသည် တီဗွီနှင့် အနီးအနားတွင် မရှိသော်လည်း တီဗွီပိတ်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်နိုင်သော အချက်များ -
Auto Power off နှင့် အခြားသော စွမ်းအင်ခြွေတာခြင်းစနစ်များအား မိမိစိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်ပြီးသော်လည်း တီဗွီပါ၀ါပိတ်ခြင်း အမှတ်မထင်ဖြစ်ပွားပါက အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။
1 တီဗွီမီးကြိုးအား ဖြုတ်ခြင်း
တီဗွီမီးကြိုးအား ပလပ်မှ ခေတ္တ ခဏ ဖြုတ်ပြီးထားပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် မီးကြိုးအား ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီး အသုံးပြုကြည့်ပါ။
2 ဆော့ဖ်ဝဲလ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်ခြင်း
မိနစ် ၃ဝကျော်အထိ တီဗွီအား ဖွင့်လျက်ထားနိုင်ပါက ဆော့ဖ်ဝဲလ်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အဆင့်ဆင်လုပ်ဆောင်မှုအား ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ။ Updating the Firmware ofaSamsung TV. ဆော့ဖ်ဝဲလ်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ပါ၀ါပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ပါက တီဗွီအား ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည်အားသတိပြုစေလိုပါသည်။
3 တီဗွီအား ပြန်လည်၍ ပြောင်းလဲ၍ တပ်ဆင်ခြင်း
အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်မှုအား ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ။How to ResetaSamsung TV.
4 ချို့ယွင်းချက်ကိုရှာဖွေနိုင်ရန် နည်းပညာကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း
အကူညီများရယူရန် ဆမ်ဆောင်းမြန်မာ Call Center ၏ Hot Line နံပါတ်ဖြစ်သော +95 1 2399888 အား နံနက် ၇ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီအထိ ပိတ်ရက်မရှိ ခေါ်ဆိုမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
How can i fix sound picture delay on my TV?
Does my Smart TV support ARC (Audio Return Channel) capability?